ALinks - Peji 62 - kufamba uye kugara kunze kwenyika kune vese
kufamba uye kugara kunze kwenyika kune vese
ALinks, Kunze kwenyika Links, kufamba uye kugara kunze kwenyika kune wese munhu
Rwemahara ruzivo uye magwara ekufambisa nekugara kunze kwenyika. Kufamba, kunakidzwa, kushanya kana kutengesa kwese kwese. Fambisa, tenga zvinhu zvaunoda, kudzidza, kushanda, kuenda kuchikoro, kana kuwana hutano hwehutano. Izvi zvinyorwa zvakazvimirira ndezve munhu wese kubva kumarudzi ese. Tinotaura mumitauro yakawanda munyika dzinopfuura makumi matatu pasi rose. Vapoteri Vanogamuchirwa!
Hutano Hutano Mu UAE !!
Dai 15, 2019 Karuna Chandna Brazil
Hutano Hutano Mu UAE. Iyo UAE ine yakakura uye yakashandurwa nehurumende hurongwa hwehutano. Nekuti iri kuwedzera. Iyo yakazvimirira yehutano yekuchengetedza indasitiri inopa yakakwirira yehutano hwehutano. Iyo inotonga zvakare padanho revaviri Federal uye Emirates.
Shanda kuUganda !!
Dai 15, 2019 Maitri Jha mabasa, Uganda
Uganda inyika iri kusimukira ine yakanaka yekukura maonero. Mumakore mashoma anotevera, hupfumi hwavo hunoratidza nzira yepamusoro, sekureva kweWorld Bank. Saka, kana iwe uri maExpats uye uchida kushanda muUganda, tinogona
Kufunda kuUganda !!
Dai 15, 2019 Maitri Jha kudzidza, Uganda
Iwe unoda kudzidza kuUganda here? Ino inzvimbo yakanaka yekudzidza semudzidzi wekune imwe nyika. Nekuda kwe approx 700, vadzidzi veAmerica vanodzidza muUganda gore rega. Letus anotanga kuziva zvakawanda nezveUganda: Uganda inozivikanwa zviri pamutemo
Dai 8, 2019 Karuna Chandna Pakisitani, kudzidza
Dzidzo yepamusoro muPakistan yakawedzera muna 1947, zvichitevera kuzvitonga kwenyika. Commission yeDzidzo yepamusoro (HEC) inotarisira iyo dzidzo system. HEC inotarisira mari, kutsvagisa zvabuda, uye mhando yekudzidzisa. Komisheni iyi inoona mayunivhesiti zana nemakumi manomwe nemana munyika. Mutauro wenyika
Ungawana sei basa muAFA, United Arab Emirates?
Dai 7, 2019 Karuna Chandna mabasa, Brazil
Iwe uri kuronga kutamira kuUnited Arab Emirates (UAE) uye nekudaro urikutsvaga mabasa. Mabasa anozivikanwa kwazvo ndeyekuchera dhata, hukama hwepasi rese, webhu dhizaini, uye Dhizaini Yevashandisi (UI) dhizaini. Saka kana uine chokwadi chekushanda
Italy: Unganyorere sei kuchengetedzwa kwenyika dzese?
April 29, 2019 Shubham Sharma Itari, vapoteri
Kana iwe uchida kutsvaga hupoteri kana kuchengetedzwa kwenyika dzese muItari, chinyorwa ichi chinokubatsira. Takatsanangura matanho anodiwa uye kupi kwekunyorera hupoteri. Zvakare, pakupedzisira, isu takapa zvinobatsira zvinongedzo. Kupi
Hutano Hutano muIndia
April 17, 2019 Maitri Jha utano, India
Kune huwandu hwenzvimbo dzehutano hwehutano muIndia. Mukufamba kwenguva, chave chigaro chepasi rose chekurapa. Zvakare, murwere anokwanisa kuwana nzvimbo dzepasi rose dzekurapa hutano pamitengo inodhura. Muchokwadi, zvipatara zvese zvakatenderedza
Maitiro Ekunyorera Visa KuIndia
April 17, 2019 Karuna Chandna India, vhiza
Kuronga kushanyira India? Iwe uchafanirwa kunyorera vhiza kuIndia. Sezvo vhiza ndechimwe chezvinhu zvakakosha kana iwe uchida kushanyira imwe nyika. Neimwe nzira, nerombo rakanaka, hurumende iri kutorawo matanho. Kuzviita
Kubhengi Ndemunhu wese, Ita zvakawanda nemari yako muMexico
April 12, 2019 Karuna Chandna Mekisiko, mari
Munguva pfupi yapfuura yakatamira kuMexico !!, kunyangwe izvo zviri zvezvidzidzo kana zvebhizinesi, ipapo ungangove wakazviwana uri mukuda kweakaundi account. Kana zvirizvo, saka iwe unozosvika pakuziva zvese nezve kubhengi isu takatenga takatenderedza Mexico nekuisa
Mahotera Akanaka kwazvo muGerman
April 1, 2019 Maitri Jha Jerimani, Hotels
Mune ino chinyorwa, iwe unowana rondedzero yemahotera akanakisa eGermany. Germany inokwevera gore rimwe nerimwe makumi emamiriyoni evashanyi. World Travelist Organisation inoisa panzvimbo senge rechinomwe rakashanyirwa zvikuru munyika muna 2018. Germany
«Previous Posts 1 ... 60 61 62 63 Next Posts»
WordPress theme: Gridbox na Themezee.